Semalt: २०१ WordPress मा WordPress १० सबैभन्दा प्रसिद्ध प्लगइनहरू
एक WordPress प्लगइन एक वेबसाइट को कार्यक्षमता विस्तार गर्न को लागी जिम्मेदार छ। यसले ई-वाणिज्य साइटहरू र ब्लगहरूमा नयाँ सुविधाहरू पनि थप्छ र PHP प्रोग्रामिंग भाषाहरूमा लेखिएको हुन्छ। प्लगइनहरूले हाम्रो वेबसाइटहरूमा नयाँ चीजहरू, र ,्गहरू र सजावटहरू थप्नको लागि सजिलो बनाउँदछ।
उत्तम वर्डप्रेस प्लगइन छनौट व्यस्त हुन सक्छ, तर यहाँ Semalt को एक शीर्ष विशेषज्ञ फ्रान्क Abagnale, यस वर्ष १० सबैभन्दा प्रसिद्ध WordPress प्लगइनहरु को बारे मा छलफल गरेको छ।
१. Yoast द्वारा WordPress SEO
यो योस्ट द्वारा सब भन्दा प्रसिद्ध र व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको WordPress प्लगइनहरू मध्ये एक हो। यो एसईओ प्लगइनले तपाइँको ब्लग पोष्टहरूमा शीर्षक र वर्णन थप्न मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई खुला ग्राफ र मेटा डाटा थप्न मद्दत गर्दछ। तपाईं आफ्नो पृष्ठ विश्लेषण पनि गर्न सक्नुहुनेछ, एक्सएमएल साइटम्याप प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ र विस्तृत प्लगइनको साथ अधिक गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्याकअपबुडी एक प्रयोग गर्न सजिलो र मैत्री वर्डप्रेस प्लगइन हो। यसले तपाईंलाई फाईलहरू ब्याकअप गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र तपाईंको लेखहरूको तालिकामा मद्दत गर्दछ थप रूपमा, ब्याकअपबड्डीले तपाईंको वेब सामग्री चोरहरू र भाइरसहरूबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको फाईलहरू क्लाउड र अन्य सम्झनाहरूमा भण्डार गर्दछ।
W. W3 कुल क्यास
तपाइँको वेबसाइटको गति खोजी ईन्जिन रँकिंगमा सुधारको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। W3 कुल क्यासको साथ, तपाइँ तपाइँको साइटको गति अधिकतम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लोडिंग घटाउन सक्नुहुन्छ, जसले निश्चित रूपमा तपाइँको बाउन्स रेटलाई कम गर्दछ।
W. डब्ल्यूपी फोर्म्स
डब्ल्यूपी फोरम्स एक उपयोगकर्ता मैत्री र मिति मा सबै भन्दा राम्रो प्लगइन हो। यसले अनलाईन फाराम बिल्डरहरूलाई ड्र्याग र ड्रप गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई सजिलै ईमेल सदस्यता फारम, भुक्तान फाराम, अर्डर फाराम, र अन्य प्रकारका अनलाइन फारमहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यसको नि: शुल्क संस्करणको साथ जान राम्रो छ, तर तपाईं सशुल्क संस्करण पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं एक ईमेल वा सामाजिक मिडिया बजार हो भने, तपाईं OptinMonster प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक महान र अचम्मको WordPress प्लगइन हो र व्यावासायिकहरूले व्यापक प्रयोग गर्दछ। यसले तपाईंलाई ईमेल सदस्यहरूको संख्या बढाउन मद्दत गर्दछ र तपाईंको ग्राहकहरूलाई खुसी खरीददारहरूमा रूपान्तरण गर्दछ।
Edit. सम्पादन प्रवाह
सम्पादन प्रवाहको साथ, तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो अघिल्लो लेखिएको लेख सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। यस वर्डप्रेस प्लगइनले तपाईंलाई नियमित आधारमा सम्पादकीय क्यालेन्डरहरू, टिप्पणीहरू, र ब्लग पोष्टहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं यसको आवश्यकताहरू अनुसार यसको सेटि customहरू अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ र उत्तम परिणामहरूको लागि सामग्री मार्केटि strategy रणनीति बनाउन सक्नुहुन्छ।
यो सुरक्षित छ कि सोलोलोकी उत्तरदायी वेबसाइटहरूको लागि उत्तम WordPress प्लगइन हो। यसले तपाइँको साइटको प्रदर्शनलाई यसको एसईओलाई चोट नपुर्‍याई बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। प्लगइन स्थापना गर्न सजिलो छ र छनौट गर्न विभिन्न स्लाइडर र ब्लेजरले भरिएको छ।
सुकुरी एक व्यापक प्लगइन हो जसले तपाइँको वेबसाइटको सुरक्षा र सुरक्षा अनुगमन गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँ ह्याकरहरू वा भाइरसहरूलाई तपाइँको साइटहरूमा हमला गर्नबाट रोक्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ सुकुरी पाउन पर्छ किनकि यसले विभिन्न वास्तविक समय अलर्टहरू, सुरक्षा स्क्यानरहरू, र मालवेयर हटाउने सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
Flo। फ्लोटिंग सोशल बार
फ्लोटिंग सोशल बार एक उत्तम सामाजिक मिडिया प्लगइन हो। यो तपाइँको WordPress साइटहरूको लागि उत्तम छ र असंख्य सामाजिक मिडिया विकल्पहरू छन्। यस प्लगइनले तपाईंलाई अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरूलाई संलग्न गराउन उपयोगी सोशल मिडिया लिंकहरू थप्न मद्दत गर्दछ।
यस पूर्वनिर्धारित वर्डप्रेस प्लगइनसँग धेरै विकल्पहरू छन् र तपाईंको साइट टिप्पणीहरू प्रबन्ध गर्दछ। यो तेस्रो पार्टी कमेन्टि plugin प्लगइन हो जसले तपाईंको सर्भरलाई असर गर्दैन र विभिन्न कार्य गर्दछ।